Chase 2012 Holiday Shopping Stats ruo ụbọchị | Martech Zone
Tọzdee, Disemba 11, 2012 Sunday, October 4, 2015 Douglas Karr
Ọ bụrụ n’ị nọ na ụlọ ọrụ Ecommerce na ị gaghị eleta saịtị Chase Paymentech Pulse, ịkwesịrị. Sekwụ mentgwọ Paymentech chịkọtara data ịkwụ ụgwọ site na 50 nke ndị ahịa azụmaahịa e-commerce kachasị ukwuu. Nke a abụghị nyocha ma ọ bụ nyocha ntuli aka, ọ bụ ezigbo, data ịzụta data sitere n'aka ndị ahịa e-commerce nke US, na-enye pasent nke uto kwa ụbọchị, afọ karịa afọ, na ọnụ ahịa dollar na azụmahịa. Charting na saịtị ahụ na-enweta ahịa zuru ezu, ọnụ ọgụgụ nke azụmahịa na nha nha tiketi. Ebe nrụọrụ ha na-enyekwa nzaghachi site n'aka ndị nyocha kachasị elu na ndị ọkachamara n'ịntanetị azụmahịa.
I nwekwara ike iso Mentkwụ ụgwọ na Facebook, Mentkwụ ụgwọ na Twitter, ma ọ bụ Paymentech na LinkedIn.
The Pulse na-atụnyere kwa ụbọchị nkezi ego ego maka otu e-azụmahịa ahịa site na 2011 ezumike oge a afọ. Ihe data ahụ na-anọchite anya ịzụrụ n'ịntanetị nke ndị ahịa jiri kaadị akwụmụgwọ, kaadị debit, mgbapụta kaadị onyinye, na ụzọ ndị ọzọ nke ịkwụ ụgwọ. Ihe data e-commerce nke Pulse abụghị iji nyochaa onye ọ bụla na-ere ahịa ma ọ naghị ekwu na ọ na-anọchite anya ụlọ ọrụ e-commerce dum; kama nke ahụ, ọ na-enye usoro ndị ahịa na-agbanwe agbanwe kwa afọ dabere na nhọrọ nke ndị ahịa azụmahịa e-commerce kachasị ukwuu nke Chase Paymentech.
ngosi: Chase Paymentech bụ onye ahịa nke DK New Media na goro anyị ịzụlite a infographic! Anyi bukwa ndi ahia. 🙂
Tags: Chụwaecommerceezumikeịzụ ahịa ezumikeusoro ịzụ ahịa ezumikeemume ezumikeịkwụ ụgwọnchịkọta